musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » Red Tourism inoputika muChina muna 2021
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • tsika nemagariro • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Red yekushanya yakava inowedzera kuve yakakurumbira sarudzo yekufamba kwevanhu vechiChinese muhafu yekutanga yegore rino.
Kushanyira nzvimbo dzezvakaitika kare nenhoroondo yemazuva ano yechimurenga inowedzera kufarirwa muChina.
Vaya vakazvarwa muma1980 nema1990 vaifarira zvakanyanya kutsvuka kwekushanya.
Kubhuka matikiti enzvimbo dzinotakura shanduko yenhaka yakakwira makumi maviri neshanu muzana muna 208.
Sekureva kweshumo richangobva kuburitswa muindasitiri, kutsvuka kwekushanya - kuenda kunzvimbo dzezvakaitika neCommunist shanduko yenhaka, yakave sarudzo inowedzera kufarirwa yekufamba kwevanhu vechiChinese muhafu yekutanga ya2021.
Chirevo ichi, chakaburitswa nevakuru vekuChinese vekufambisa online, chakati huwandu hwevanhu vanobhuka matikiti pachikuva chemasaiti ane ChinaIyo yekuchinja nhaka yakasimuka ne208 muzana gore pagore panguva iyi.
Iyo nhamba inomiririra 35-muzana kuwedzera kubva panguva imwecheteyo mu2019, akadaro mushumo.
Vaya vakazvarwa muma1980 nema1990 vaifarira zvakanyanya kutsvuka kwekushanya, vachiverenga zvikamu makumi matatu nemasere nezvikamu makumi matatu nepfumbamwe, zvichiteerana, zvehuwandu hwevanhu vanoshanyira nzvimbo dzakadai.
Tian'anmen Square, Military Museum yeChinese People's Revolution uye Jinggang Mountains ndeimwe yenzvimbo dzakakurumbira dzekushanya kwekutsvuka, akadaro mushumo.